China 15Khz 2600w High Power Ultrasonic Welding Oscillator nge Steel Ukulekelela Ukwakha futhi Factory | Qianrong
I-15Khz 2600w High Power Ultrasonic Welding Oscillator ene-Steel Booster
Imvamisa I-15 khz
Amandla wokukhipha 2600 watt
I-bolt ehlangene I-M16 * 1
Ceramic disc Ububanzi 60mm
Ubuningi bamadiski e-ceramic 4pcs
Isicelo Umshini Welding wePlastiki
I-ultrasonic Oscillator ibizwa nangokuthi i-ultrasonic vibrator. Yonke imboni ixhunywe ophondweni kanti uphondo lubizwa nge-vibrator. Isidlidlizi se-ultrasonic iyithuluzi eliguqula amandla kagesi namandla kagesi (i-acoustic vibration) ngomphumela we-piezoelectric we-piezoelectric ceramics, futhi ikhulisa amabhulokhi emisebe ngaphambili nangasemuva ngokufanisa kwe-acoustic impedance.
I-vibrator ye-ultrasonic yakhiwa i-transducer ye-ultrasonic nophondo lwe-ultrasonic. I-Ultrasonic transducer iyithuluzi elingaguqula amandla kagesi aphezulu kakhulu abe amandla kagesi. Uphondo lwe-Ultrasonic luyisetshenziswa esingenzi lutho esidlidliza. Ishintsha kuphela ubukhulu be-input vibration kusuka ku-transducer ye-ultrasonic bese buyidlulisa. Ukuguqulwa kwe-impedance.
Ungayikhetha kanjani umshini wokushisela opulasitiki we-ultrasonic onemvamisa ye-20khz ne-15khz?
Amaza ajwayelekile kakhulu emishini yokushisela i-ultrasonic yi-15khz ne-20khz imishini ye-plastic welding. Ukuphakama kwemvamisa ye-ultrasonic, ngcono ukunemba kwe-welding, kepha amandla amancane esihlobo, amancane ubukhulu be-amplitude. Okulandelayo kuchaza umehluko phakathi komshini we-ultrasonic welding 15khz no-20khz:
Lapho imvamisa ye-ultrasonic iphansi, umsindo uyenziwa. Lapho imvamisa ingaphansi kwama-khz angama-20, umsindo uba mkhulu kakhulu ngesikhathi sokushisela kwe-ultrasonic. Ngemikhiqizo yepulasitiki enokunemba okuphezulu kwe-welding, ukuphakama kwemvamisa, kungcono. Ngakho-ke, umshini wokushisela we-ultrasonic we-20khz noma ngaphezulu ulungele ukucacisa, izingxenye ezincane zepulasitiki ezincanyana kakhulu, njengekhadi le-SD, noma imikhiqizo enekristalu ngaphakathi komkhiqizo; Umshini wokushisela we-15khz we-ultrasonic kulula ukukhulisa futhi une-amplitude enkulu. Ifanele ukuwelda ngosayizi abakhulu, okunzima uku-weld, imikhiqizo yepulasitiki eqolo;
Okwesibili, ubukhulu besikhunta se-15khz no-20khz nabo abuhambisani. Ukuphakama kwesikhunta se-15khz se-ultrasonic ngokuvamile cishe kungu-17cm ubude, kanti isikhunta se-20khz se-ultrasonic cishe siyi-12.5cm ubude.
Nakulokhu futhi, umshini wokushisela we-15khz we-ultrasonic ungashisela imisebenzi emikhulu, futhi amandla angahlukaniswa abe ngu-2600w / 3200w / 4200w. Umshini we-20khz ultrasonic welding umshini ngu-900W - 2000w, amandla amancane, futhi nosayizi womkhiqizo oshisekayo mncane.
Langaphambilini I-Advanced 20Khz 3300w ye-Ultrasonic Welding Replacement CJ20 Transducer ene-Metal Steel Outer Cover
Olandelayo: I-20Khz 1500w Ultrasonic Welding Transducer ene-Steel Booster Vibration System
Intelligent 15Khz Ultrasonic Generator Digital ...